Fiainan-tokantrano :: Mihamahazo vahana ny olana eo amin’ny mpivady • AoRaha
Fiainan-tokantrano Mihamahazo vahana ny olana eo amin’ny mpivady
Fikorontanan’ny tokantrano. Mateti-piseho tato ho ato ny disadisa eo amin’ny mpivady, araka ny filazan’ireo manam-pahaizana momba ny toetra (Psychologue). Ny fikorontanan’ny fiaraha-monina iainanan’ny mpivady no tena manimba an’ilay tokantrano raha ny fanamarinan’izy ireo ka mitarika amin’ny fisaharana efitra, ohatra. Misy amin’ireo mpivady aza no mifamono mihitsy.
“ Efa mahaleo tena kokoa ny vehivavy ankehitriny. Tsy miandry an’ilay hoe velomina fotsiny intsony izy ireo. Misy ihany koa ireo mpivady tsy mihaona matetika noho ny rotorotom-piainanana. Betsaka ireo fepetra takian’ny fiaraha-monina toa lasa vesatra ho an’ilay mpivady sy ny maro hafa ”, hoy Andrianilaina Koloina, filohan’ny Holafitry manam-pahaiza momba ny toetra eto Madagasikara, omaly.
Na izany aza, nanamafy ny avy amin’io Holafitra io fa maro ireo mpivady no manatona azy ireo ankehitriny mba hisorohana ny fisaharam-panambadiana na ny fitadiavana hevitra mba tsy handravana an’izay zavatra niarahan’izy ireo nanangana manoloana an’ireo olana maro sedrain’ny mpivady. Misy ihany koa ireo mbola mikaroka hevitra hanavotana ny tokantranony.
Fitiavana be loatra!
“Tsy voatery ny mpivady no manatona aty aminay. Misy, ohatra, ilay olona tena nampijaly be ny vadiny na nahatsiaro tian’ity farany be loatra ka mihevitra fa hiverina indray na hitady ny fototry ny olana eo amin’izy ireo dia mitady vahaolana avy eo”, araka ny fanampim-panazavan’Andrianilaina Koloina. Nambarany fa ny fijeren’izy ireo ny fototry ny olana eo amin’ireo olona ireo no anisan’ny vahaolana atolony.
Fantatra fa tsy mahasakana ny olona tsy hanatona an’ireny manam-pahazaina manokana momba ny toetra ireny ny sarany aloa , izay manomboka amin’ny telo alina ariary hatramin’ny iray hetsy ariary. Misy koa anefa ireo manam-pahaiza momba ny toetra efa mpiasam-panjakana ka maimaim-poana ny fanatonana azy. Hanatanteraka hetsika fampahafantarana ny asan’izy ireo ao amin’ny Holafitra amin’ny alatsinainy ho avy izao, eny amin’ny Akademia Tsimbazaza. Misokatra ho an’ny rehetra io hetsika io.
Tontolo iainana :: Olana mitoetra ny tsy fifehezana ny doro tanety